skin diseases – Healthy Life Journal
All posts tagged "skin diseases"
မျက်နှာမဲတာ ဘာလုပ်နိုင်သလဲ (Skin Pigmentation)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— အရေပြားမှာ နဂိုထက် ပိုညိုနေ-မဲနေ-ရဲနေတာ (Skin Pigmentation) မျိုးကို ဆေးစာနဲ့ Hyperpigmentation ခေါ်တယ်။ အရောင်ပိုနုနေရင် Hypopigmentation ခေါ်တယ်။ အရေပြားက (ဆဲလ်)တိုင်းမှာ Melanin (မယ်လနင်)ခေါ်တဲ့ အရောင်ဆိုးဆေးရှိတယ်။ အဲဒီ(ဆဲလ်)တွေ မကောင်းရင်...
အရေပြားပေါ်က အမည်းစက်များကို ညတွင်းချင်း သက်သာလျော့ပါးစေမည့် အိမ်တွင်းကုထုံး
(၁) အာလူး အာလူးမှာ သဘာဝကြေးချွတ်အစွမ်းရှိတာကြောင့် အသားအရေကို ဖြူစင်စေပြီး အမည်းစက်တွေကို ဖျော့တော့စေပါမယ်။ ကြိတ်ချေထားတဲ့ အာလူးအရည်ကို အမည်းစက်တွေပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်နီမှာပါတဲ့ အက်စစ်က သဘာဝလင်းလက်စေတဲ့ အစွမ်းရှိပြီး အမည်းစက်တွေကို ဖျော့တော့စေပါမယ်။ ကြက်သွန်နီအရည်ကို...
အရေပြားယားတာ ဆီးချိုနဲ့ဆိုင်ပါသလား . . .
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ဆီးချိုရောဂါကြောင့် အရေပြားယားယံတတ်ပါသလား။ A. ဆီးချိုသွေးချိုတက်ရင် အရေပြားယားယံတတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူတွေက အရေပြား ပိုးဝင်လွယ်ပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုက သာမန်နဲ့မတူဘဲ မှိုရောဂါဝင်လွယ်တာနဲ့ ပွေး၊ ဝဲ စတာတွေ ဝင်လွယ်တာတွေ...
အရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်သည့် အဖုလုံးသေးများ သို့မဟုတ် ငါးမျက်စိရောဂါ (Molluscum Contapiosam)
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ၊—– Q. ငါးမျက်စိဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံကို ပြောပါသလဲ ဆရာမ။ A. ငါးမျက်စိဆိုတာ အရေပြားပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလုံးသေး၊ အဖုလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးမျက်စိ အဖုတစ်ခုက ၂-၅ မီလီမီတာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။...
သင့်အသားအရေ ထိခိုက်စေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တခြားမြို ့ရပ်တွေကို အလည်သွားပြီး ပြန်လာချိန်မှာ အသားအရေနီမြန်းတာ၊ အဖုအပိမ့်ပေါက်တာ စတဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ ပေါ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသလား။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ကြုံနေရတာက ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ အသားအရေကို အိုမင်းထိခိုက်စေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကတော့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊...
အသားအရေ ယားယံခြောက်သွေ့မှု ကင်းဝေးစေမည့် နည်းလမ်းများ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်အသားအရေရဲ့စိုပြေမှုဟာ အသားအရေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လေထုရဲ ့စိုထိုင်းဆပေါ်မှာလည်း အကြီးအကျယ် မူတည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြောက်သွေ့အေးမြတဲ့နေရာမှာ နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ စိုထိုင်းဆကနည်းပြီး လေထုက ခြောက်သွေ့နေတာကြောင့် လူအများစုရဲ့ အသားအရေက ခြောက်သွေ့ယားယံနေတတ်ပါတယ်။...